Isoftware yokuThengisa: abaDlali abaPhambili kunye nokuFunyanwa | Martech Zone
Ngaphezulu kwamashishini ali-142,000 asebenzisa isoftware ezenzekelayo. Izizathu ezi-3 eziphezulu kukunyusa izikhokelo ezifanelekileyo, ukonyusa imveliso yentengiso, kunye nokunciphisa ukuthengisa ngaphezulu. Umzi mveliso wezentengiso ukhule ukusuka kwi- $ 225 yezigidi ukuya ngaphezulu kwe- $ 1.65 yezigidigidi kule minyaka mihlanu idlulileyo
Le infographic ilandelayo ivela Ukuthengisa ngaphakathi ngaphakathi Iinkcukacha zokuzivelela kwesoftware ezenzekelayo evela e-Unica ngaphezulu kweshumi leminyaka eyadlulayo nge- $ 5.5 yezigidigidi yexabiso lokuthenga okusizisileyo ukuza kuthi ga ngoku, kubandakanya amaqonga alandelayo okuthengisa:
Umthetho-On -Iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa elakhelwe ukukunceda ukuhambisa amava abalulekileyo kubathengi bakho. Ukusuka kolwazi lwebrand kunye nokuveliswa kwebango, ukugcinwa kunye nokunyaniseka, itekhnoloji yethu yenza ukuba abathengisi bavele kukhuphiswano kwaye baqhube iziphumo ezingcono.
Iphulo leAdobe - Iseti yezisombululo ezikunceda ukuba ubenakho kwaye uhambise amaphulo kuwo onke amajelo akho akwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi. Iphulo linokubonelela ngeeprofayili zabathengi ezihlanganisiweyo, i-cross-channel ye-orchestration, intengiso ye-imeyile kunye nolawulo lwentsebenzo yexesha lokwenyani.
Isisombululo seNtengiso ye-IBM -Ingxenye ye-IBM Commerce portfolio, IBM Marketing Solutions yenza ukuba ubenakho ukuzibandakanya nabathengi bakho kwiincoko ezifanelekileyo, ezisebenzisanayo kuzo zonke iindlela zedijithali, ezentlalo, ezeselfowuni nezesintu. Unokwenza ubuqu kwaye ulungiselele imikhankaso enqamlezileyo kunye neenzame zentengiso yedijithali yokuguqula iindwendwe zibe ngabathengi abaphindayo kunye nabameli.
Ukuhambahamba kweHubspot -Khulisa abafowunelwa bakho kunye nabathengi ngononophelo olusekwe kwiinjongo, ukukhokela amanqaku, izaziso zangaphakathi, umxholo wewebhusayithi owenzelwe wena, ingcinga ye-branching, kunye nezahlulo.
IBM Silverpop -Zenzekelayo unxibelelaniso olwenzelwe wena kwisikali kwaye uhambise umyalezo onentsingiselo kunye nokuhambelana kakhulu kuwo onke amanyathelo kubomi bomjikelo wabathengi.
Infusionsoft -Yakhelwe emhlabeni ukusombulula ezona ngxaki zinkulu zamashishini amancinci. Ukuba ujonga iindlela ezikrelekrele zokukala njengoko ukhula, iqonga elinamandla le-Infusionsoft linokunceda. Lawula imisebenzi yemihla ngemihla ethe chu isantya sakho — ngokuzenzekelayo.
UMarketo -Fumana kwaye ubandakanye abathengi abalungileyo. Bancede bafunde oko bafuna ukukwazi malunga neemveliso zakho njengoko beqala uhambo lwabo. Funda malunga nentengiso yokukhangela, iphepha lokufika, ubuntu kwiifom, iifom, imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye nendlela yokuziphatha.
Intengiso yeMicrosoft Dynamics Isisombululo esihlanganisiweyo solawulo lwezixhobo zentengiso sokusebenza, ukucwangcisa, ukwenziwa, kunye kubahlalutyi kuwo onke amajelo-imeyile, idijithali, intlalontle, iSMS, kunye nesiko.
I-Oracle Eloqua -Nika amandla abathengisi ukuba bacwangcise kwaye baqhube amaphulo ngelixa behambisa amava abaxhamli beenkonzo zabo. Amaphulo akala kakhulu abaphulaphuli kuwo onke amajelo kubandakanya i-imeyile, ukubonisa ukukhangela, ividiyo kunye neselfowuni. Ngolawulo oludibeneyo olukhokelwayo kunye nokwenziwa kwephulo elilula, isisombululo sethu sinceda abathengisi ukuba babandakanye abaphulaphuli abalungileyo ngexesha elifanelekileyo kuhambo lomthengi wabo. Amaqela okuthengisa anokuvala amadili angaphezulu ngesantya esikhawulezayo, ukunyusa intengiso ye-ROI ngokusebenzisa ukuqonda okwenzeka ngexesha langempela.
Ukuthengisa kweLifu lokuThengisa -Ilifu lokuThengisa ngeNtengiso livumela amashishini alo nabuphi na ubungakanani ukuba akhulise ishishini labo ngokwenqanaba lobungcali lokuthengisa nge-imeyile. Ngelixa kungenjalo ngokuthe ngqo isoftware ezenzekelayo, Ukuthengiswa kokuThengiswa kweeNkonzo ukuhlanganiswa kwemveliso kunye neNtengiso yokuZenzekelayo ezininzi maqonga.
Iintengiso Pardot -I-B2B yokuZenzekelayo ithengisa abathengisi bemihla ngemihla kwii-superheroes ezenza ingeniso. Iqonga labo lokuzenzekelayo libonelela ngentengiso ye-imeyile, ukuvelisa okukhokelayo, ulawulo olukhokelayo, ulungelelwaniso lokuthengisa kunye nengxelo ye-ROI.
Izicelo zokuThengisa iTeradata -Ukufezekisa ubuchule bokuthengisa, ukuqonda abathengi njengabantu, kunye nokwenza unxibelelwano lwedijithali olunamandla kuwo onke amajelo aneZicelo zeNtengiso yeTeradata.
Ukuthengisa ukuZenzekelayo ngaphakathi itshathi iindleko eziphakathi zokufumana iilayisensi, eye yehla njengoko inani labakhuphiswano liye lanyuka. Ungazithelekisa zonke izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo kwimizuzwana eli-10 kwiNtengiso ye-Automation Insider.
Thelekisa izixhobo zokuThengisa
tags: Umthetho-OnIsoftware esebenza kwisoftwareUmdlali weqongaIsoftware ye-actonzodakaaprimongxieloquangqoNgokungokwasentlalwenihubspothubspot iyenzekaUkuhamba kwehubbspotIBMIzisombululo zentengiso ze-ibmibm yesilivereibm unicaInfusionsoftingcacisoumtyakwimakethiukuthengisa ngokuzenzekelayo ngaphakathiintengisouphawuuphawu lwentengisomicrosoftintengiso yemicrosoft microsoftneolanemzantsiOracleuxolelokuyenzekaukunyuka kokuzenzekelayo kwentengisoukuthengisaukuthengisa uxoleloukuthengisaIsiliverePopteradataIzicelo zentengiso ye-teradataUnicandingen
Jul 20, 2016 ngo-5: 13 AM
Ukonakala okumangalisayo kwimbali yentengiso ezenzekelayo kwaye kuyonwabisa ukubona ukuba sihambile kangakanani.
Feb 14, 2017 ngo-2: 16 AM
Uluhlu olukhulu lwezinto zokuthengisa ezizenzekelayo ezizenzekelayo Ndiyayithanda i-infusionsoft uninzi ngenxa yeempawu ezoyikekayo ezibonelelweyo.
I-Salesforce ikhule kakhulu ngokufumana iinkampani ezininzi.